I-Fastpay casino - Wonke amabhonasi amasha namakhodi ephromo (amakhodi ebhonasi) 2021
Fastpay casino - amabhonasi namakhodi wokukhushulwa
E-Fastpay Casino, amabhonasi anikezwa ngendlela engajwayelekile. Kungabonakala kubasebenzisi abangenalwazi ukuthi inqubomgomo yebhonasi yesayithi ilula impela, kepha lokhu akuwona amanga. Kubasebenzisi bayo, abahleli besikhungo bakhe indlela entsha ngokuphelele yokwakhiwa kohlelo lokukhuthaza.
Isici sohlelo lwamabhonasi ukuthi inani lemivuzo liyashintsha enqubeni yokwandisa isimo somgembuli kuhlelo lokuthembeka lwekhasino le-Fastpay . Kubasebenzisi abasanda kubhaliswa, ukuphathwa kwesiza kunikezela ngamaphakethe okuqala, futhi kunikeza abadlali abajwayelekile ithuba lokubamba iqhaza ohlelweni lwe-VIP.
Ukwenza kusebenze zonke izinhlobo zamabhonasi we-portal kuyatholakala kanye kumsebenzisi ngamunye kusuka kukheli elilodwa le-IP le-static, idivayisi yomuntu siqu, inombolo yocingo ngayinye ne-akhawunti yomuntu siqu yohlelo lokukhokha. Uma iklayenti lizama ukweqa umthetho onjalo, uhlelo luzovimba ibhalansi yakhe futhi luthathe yonke imali ebikade ikulo. Konke ukubheja okwenziwa ngemali evela ku-akhawunti yebhonasi akuthinti isimo esigcinwe ohlelweni lwe-VIP, ngoba kuthuthukiswa kuphela ngokudlala ngemali yangempela.
Ibhonasi eyodwa yediphozi ingenziwa isebenze ngesikhathi esisodwa, ngoba azikwazi ukuhlanganiswa. Ngesikhathi somdlalo, izimali ekuqaleni zidonswa kubhalansi yekhasimende, bese kusuka ku-akhawunti yebhonasi. Ama-spins wamahhala akhishwa ngesilinganiso esincane. Amabhonasi okuqala nawesibili we-x50 yokubheja ayasuswa. Kwabanye, le coefficient ingabonakala sengathi yeqisiwe, kepha kufanele kukhunjulwe ukuthi awukho umkhawulo enanini eliphelele lolo hlobo lokukhuthaza, olwenza lube nomusa kakhulu futhi lube nenzuzo kubadlali bokugembula.
Ibhonasi yokuqala yediphozi njengephromoshini eyamukelekile
ibhonasi yediphozithi engama-25 FS, nesipho sosuku lokuzalwa sizoba ngama-50 FS. Kusukela ezingeni lesine, abagembuli bangakwazisa ukuphana kwesikhungo, bengatholi kuphela izipho ezibalwe ngenhla, eziba zinkulu kakhulu, kepha futhi nebhonasi yokulayisha kabusha.
Ngaphezu kwezikhuthazo ezisohlwini, abasebenzisi esinyathelweni sesihlanu bathola ithuba eliyingqayizivele lokushintshanisa amaphuzu atholakele ngemali yangempela kanye ngonyaka. Kusukela ezingeni lesishiyagalolunye, abadlali baqala ukuthola u-10% wemali esetshenzisiwe, ngaphezu kwawo wonke amalungelo atholakalayo ngaleso sikhathi. Izinga le-VIP lisho ukubalwa komuntu ngamunye kwazo zonke izipho ezibalwe kusuka esikhungweni.